फ्यूज - यो के हो? फ्यूज को सञ्चालनको सिद्धान्त
वाहन मा इलेक्ट्रनिक्स प्रणाली र subsystems को एक किसिम को लागि जिम्मेवार छ। प्रकाश, ध्वनि प्रणाली, ठंडा, तर त्यहाँ के, तपाईं पनि इन्जिन यदि शक्ति विफलता सुरु छैन। दुर्भाग्यवश, यो क्षेत्र "फ्लोट" र धेरै चालक मा सधैं अक्सर समस्या मात्र Blown फ्यूज सम्बन्धित भन्ने तथ्यलाई बावजुद, विद्युत सर्किट समस्याहरू सामना गर्न सक्षम छन्। यो अक्सर जीर्णता मा आउँछ र ड्राइभर confuses एक रक्षा संयन्त्र छ। को भौतिक follwing थप तिनीहरूलाई को एक को असफलता को मामला मा एक प्रतिस्थापन रूपमा काम गर्दछ, एक फ्यूज के छलफल।
को फ्यूज के हो?
फ्यूज - एक विशेष विद्युत स्विच यन्त्र, जसको कार्य खोल्ने वा यसको गिरावट (जल) अग्रिम तिनीहरूलाई मार्फत एक बढ्तै उच्च विद्युत वर्तमान पारित द्वारा प्रदान प्रवाहकीय अंश को द्वारा सुरक्षित सर्किट विच्छेद छ। लगभग बोल, फ्यूज - यो आत्म-विनाशकारी सम्पूर्ण इलेक्ट्रनिक्स (कार वा विद्युत उपकरण) एउटा खतरा को मामला मा को संयन्त्र सुरक्षा। आत्मत्यागी एक प्रकारको, तपाईं metaphorically कुरा भने।
को फ्यूज को सञ्चालन सिद्धान्त
वाहनहरु प्रयोग गरिन्छ र फ्यूज अनुसार एक मूल्याङ्कन लोड क्षमता संग चयन गरिएका छन्। भोल्टेज rises गर्दा आपतकालीन अवस्था मा, फ्यूज मा फ्यूज खुल्छ र एक विद्युत सर्किट खण्डन।
आत्म-विनाश प्रक्रिया को मामला मा सुरु गरिएको छ:
छोटो सर्किट - हुन्छ इन्सुलेशन प्रवाहकीय भागहरु वा उपकरणहरूको अनुचित जडान भङ्ग थियो। कार मा समस्या frayed केबल इन्सुलेशन सबै, फ्यूज विफलता को सबै भन्दा बारम्बार कारण एक।
Incompatibilities शक्ति खपत उपकरणहरू र नाममात्र वर्तमान बल, को एक विशेष विद्युत सर्किट लागि अनुमति। यो (तिनीहरूलाई जस्तै प्रकाश, रेडियो र अरूलाई) आफ्नो कार मा स्थापना गर्न अतिरिक्त विद्युत उपकरण निर्णय गर्नेहरूलाई द्वारा सामना समस्या छ। यस्तो शक्तिशाली ऊर्जा उपभोक्ताहरु आधार ताराहरु, वर्तमान को एक उच्च रकम लागि डिजाइन गरिएको छ जो देखि खुवाइन्छ। कारण माथि-वर्तमान शक्ति तार गर्न पग्लियो र फ्यूज विफलता रू एक छोटो सर्किट, नेतृत्व छन्।
फ्यूज ट्रिपिंग सीमा
माथिको देखि यो वाहन मा फ्यूज को दर्जा दिइएको शक्ति मूल्य अधिक को मामला मा तल खण्डन गर्ने स्पष्ट हुन्छ। एक fusible फ्यूज भाग overheats र बाहिर बल्छ।
वर्तमान मूल्याङ्कन फ्यूज सूत्र द्वारा गणना गरिएको छ: Inom = Pmax / यू
Inom - को नाममात्र वर्तमान मूल्य, amperes मा मापन गरिएको छ जो;
Pmax - जो एक विशेष उपकरण ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ अधिकतम सम्भव लोड छ। शक्ति उपकरणमा संकेत छ र वाट मापन गरिएको छ;
यू - को mains भोल्टेज को स्तर छ। यो वोल्ट मा मापन गरिएको छ। वाहन नेटवर्क मा भोल्टेज स्तर वोल्ट 12 छ।
फ्यूज को प्रकार
फ्यूज को दर्जा दिइएको शक्ति, साथै फ्यूज आफूलाई आकार अनुसार वर्गीकृत छन्।
को फ्यूज को आकार मा विभाजित छन्:
माइक्रो - सबैभन्दा संकुचित।
मिनी - एक सानो थप (16 मिलिमिटरमा)।
सामान्य - सामान्य आकार (19 मिमी)।
Maxi - सबै भन्दा ठूलो (34 मिमी)।
हालको बलको धेरै महत्त्वपूर्ण विभाजन। सुविधाको लागि, तिनीहरू सबै एक निश्चित रंग चिनो लगाइएको, तर रंग मा केवल भर आवश्यक छैन, एक रंग विदेशी कार ती फरक चिनो लगाइएको हो, किनभने यो क्षेत्रमा कुनै स्तर अवस्थित छैन छ VAZ फ्यूज जस्तै।
एक सुरक्षा बक्स फेला - फ्यूज जाँच गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई विस्थापन गर्न प्रयास गर्दा मोटरहाक्ने व्यक्ति सामना गर्न पहिलो कुरा। यो कुरा बाहिर जहाँ फ्यूज स्थित छ, एक तुच्छ कार्य फेला पार्न छ। यस यात्री कक्ष विभिन्न भागमा वा हुड स्थित फ्यूज ब्लक मिसिन को विभिन्न मोडेल। कहिलेकाहीं फ्यूज को संख्या निकै बढेको छ, र स्वतः निर्माता मिसिन को विभिन्न भागहरु मा धेरै ब्लक लगाउनुहुन्छ। यस्तो भ्रम को विश्वव्यापी योजना वा सुरक्षा एकाइ को मार्गदर्शन खोज प्रस्ताव किनभने बस असम्भव छ। उदाहरणका लागि, घरेलू उत्पादन फ्यूज को मिसिन मा हुड (क्लासिक लेआउट "Zhiguley" को लागि विकल्प) अन्तर्गत अवस्थित छ। विदेशी कार मा थप जटिल छ। को "टोयोटा Corolla" ड्यासबोर्डमा मा स्टेरिड़ को सही गर्न स्थित मा फ्यूज। यो एक देश उत्पादकहरु वस्तुहरूको स्थान को विकल्प मा यस्तै हुनुपर्छ भनेर जस्तो थियो, तर वास्तविकता अन्यथा छ। को "निसान Almera" मा फ्यूज एउटा सानो खल्ती मा स्टेरिड़ को बायाँ स्थित।
काम फ्यूज - यो मुख्यतया एक सुरक्षा छ। त्यसैले तिनीहरूलाई अवस्था काम मा राख्न आवश्यक छ। कार मा इलेक्ट्रोनिक तत्व कुनै पनि आदेश बाहिर छ भने, तपाईं प्रदर्शन विवरण जाँच गर्नुपर्छ। कसरी यसलाई के गर्ने? धेरै चालक बस सुरक्षा एकाइ पहुँच र आफ्नो अवस्थाको दृश्य मूल्यांकन लागि हटाइएको को फ्यूज बारी। कार मालिक बस जम्पर मा फ्यूज क्षतिग्रस्त छ भने हेर्न हेर्न। निस्सन्देह, यो विधि काम गर्छ, तर यो एमेच्योर लागि विशिष्ट छ, र साथै, पट्टीले फ्यूज Blown पनि जस्ताको तस्तै रहन सक्छौं किनभने, सधैं विश्वसनीय छैन। जाँच गर्न भागहरु को स्थिति कि कार्य रोकियो (यो रोशनी, एक चुलो वा स्टेरियो सिस्टम छ कि यो कुनै पनि इलेक्ट्रनिक्स हुन सक्छ), र त्यसपछि फ्यूज मा भोल्टेज स्तर जाँच गर्न एक मल्टीमीटर प्रयोग श्रृंखला समावेश गर्न राम्रो छ, यो सर्किट लागि जिम्मेवार छ। यो प्रमाणिकरण धेरै कम समय लाग्छ र सही परिणाम दिन्छ।
यदि फ्यूज असफल भएको छ, यो तुरुन्तै प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। , सुरु गर्न फ्यूज बक्समा फेला (एकाइ हुड अन्तर्गत स्थित छ भने, ब्याट्री अग्रिम जडान विच्छेद हुनु पर्छ)। फ्यूज बक्समा को आवरण देखि स्क्रू हटाउन। रेन्च 10 तार गर्न कस्नु धारण कि नट वोल्ट नट आदि खोल्नु। यो तिनीहरूलाई (तिनीहरूले फ्यूज गर्न पहुँच बन्द) सार्न गर्न गरिन्छ। पनि फ्यूज संग प्यानल थप सुविधा को लागि हटाउन सकिन्छ, तर यो वैकल्पिक छ। त्यसपछि बस जंक फ्यूज हटाउन र आफ्नो ठाउँमा नयाँ मा (को पाठ्यक्रम, दायाँ आकार र बराबरीको मा) राखे।
चयन गर्नुहोस् र फ्यूज जाँच
एक फ्यूज छनौट तपाईं को लागि, तपाईं अवस्था एक नम्बर मनमा राख्नु पर्छ आवश्यक छ। नयाँ वस्तु छानेर, तपाईं मात्र विश्वसनीय निर्माता आफ्नो उत्पादन गुणस्तर लागि जिम्मेवार पहुँच हुनुपर्छ। यसलाई अन्य मोटर चालकहरुलाई स्थित समान कार र लोड सर्किट संग परामर्श गर्न मनमोहक छ। रूपमा फ्यूज को सबै भन्दा जहाँ यो प्रक्रिया जो कोहीले नियन्त्रण छैन चीन, मा निर्मित गर्दै यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने दोषपूर्ण उत्पादनहरु को मात्र इलेक्ट्रनिक्स, तर पनि सम्पूर्ण वाहन छैन नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जब फ्यूज ब्लक जलाइएको र आफूलाई जस्ताको तस्तै रहने फ्यूज पटक थिए।
विवरण गुणस्तर जाँच गर्न, यो वाहन बाहिर छोटो सर्किट प्रकुपित गर्न आवश्यक छ, र यदि फ्यूज blows, त्यसपछि उहाँले आफ्नो कार क्षतिग्रस्त प्रतिस्थापन गर्न गुणस्तर र सारा पार्टी, लाग्न सक्छ।
कृत्रिम छोटो-सर्किट primotat तार को अन्त्य फ्यूज गर्न आवश्यकता सिर्जना गर्न, र त्यसपछि तिनीहरूलाई एक सकारात्मक र नकारात्मक गर्न दोस्रो जोडिएको छ र नाममात्र भन्दा उच्च एक भोल्टेज संग एउटा बिजुली वर्तमान तिनीहरूलाई राख्नु।
थप उपकरण स्थापना
तपाईं कार सामान स्थापना गर्ने योजना भने, यो आफ्नो कार को मानक ताराहरु यस्तो लोड खडा कि निर्धारण गर्न आवश्यक छ। उहाँलाई आधा पटक सर्किट को दर्जा दिइएको वर्तमान भन्दा उच्च हुन लागि भने, त्यसपछि नयाँ उपकरण छुट्टै ताराहरु र फ्यूज आकार पकड गर्न आवश्यक हुनेछ। लोड गणना गर्न तपाईं ओम व्यवस्था र विशेष टेबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बहुभाषी - एक ... भाषा बिज्ञान को शाखा - भाषाविज्ञान
अंग्रेजी मा निष्क्रिय आवाज: प्रकृति, शिक्षा को नियम, अनुवाद को विधिहरू
केही, कुनै पनि, कुनै - सामान्यतया तालिका र सर्वनाम प्रयोग
जब अघि "र" के अवस्थामा एक अल्पविराम?
मा रूसी भाषा बोलीको शैली
वाक्यांश शब्दहरू को संचार। वाक्यांश शब्दहरू को कनेक्शन को प्रकार
विद्युत हात। निःशुल्क बिजुली आफ्नो हात कसरी प्राप्त गर्न
प्राविधिक सिस्टम मा स्वचालित नियन्त्रण
बाल दुई रंग मा रङ लगाउन: एक असामान्य र सुन्दर
सीधा लाइन गति
कुटपिट मा sausages
मार्क ठोस वा ग्रेड? तपाईंको आफ्नै घर को निर्माण मा ठोस कसरी वर्गीकरण गर्न?
चित्रकारी परेड: वर्णन, सुविधाहरू, विशेषताहरु, प्रकार र मूल्यांकन
त्यहाँ एक बच्चाको आँखा अन्तर्गत गाढा सर्कल थिए? कारण डाक्टर संग, खोज्नुपर्छ सँगै
अम्बर्टो Boccioni - theorist र Futurism को अग्रगामी
आपतकालीन शवर: विवरण र समीक्षा
अचानक चक्कर र कमजोरीको कारण